Yesu Dɔ Te sɛ N’Agya Dɔ Pɛpɛɛpɛ | Bɛn Yehowa
1-3. (a) Dɛn na ɛmaa Yesu pɛe sɛ ɔyɛ sɛ N’agya? (b) Yesu dɔ no afã bɛn na yɛbɛhwehwɛ mu?
WOAHU abarimaa ketewaa a ɔrebɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ sɛ n’agya pɛn? Ɔbabarima betumi asuasua sɛnea n’agya nantew, sɛnea ɔkasa, anaa sɛnea ɔyɛ n’ade. Bere kɔ so no, abarimaa no betumi afa n’agya abrabɔ ne honhom fam nneɛma ho su horow a ɔwɔ no mpo. Yiw, ɔdɔ ne obu a ɔbabarima no wɔ ma agya a ɔwɔ ɔdɔ no kanyan no ma onya ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ sɛ n’agya.
2 Na abusuabɔ a ɛda Yesu ne ne soro Agya ntam no nso ɛ? Yesu kae bere bi sɛ: “Medɔ agya no.” (Yohane 14:31) Obiara ntumi nnɔ Yehowa nsen Ɔba yi a na ɔne Agya no atra bere tenten ansa na wɔrebɔ abɔde foforo biara no. Saa ɔdɔ no na ɛkaa Ɔba a ɔwɔ ahofama yi ma ɔpɛe sɛ ɔyɛ sɛ N’agya.—Yohane 14:9.
3 Wɔ nhoma yi ti ahorow bi a edi kan mu no, yesusuw sɛnea Yesu suasuaa Yehowa tumi, atɛntrenee, ne ne nyansa pɛpɛɛpɛ no ho. Nanso, ɔkwan bɛn so na Yesu daa N’agya dɔ adi? Ma yɛnhwehwɛ Yesu dɔ no afã abiɛsa—n’ahofama honhom, n’ayamhyehye, ne ɔpɛ a ɔwɔ sɛ ɔde bɔne befiri no—mu.
“Obi Nni Dɔ Kɛse a Ɛsen Eyi”
4. Ɔkwan bɛn so na Yesu yɛɛ ahofama a efi ɔdɔ mu a ɛsen biara a onipa bi ada no adi ho nhwɛso?
4 Yesu yɛɛ ahofama a efi ɔdɔ mu ho nhwɛso a ɛda nsow. Ahofama hwehwɛ sɛ yebefi ayamye mu de afoforo ahiade ne wɔn haw ahorow adi yɛn de kan. Ɔkwan bɛn so na Yesu daa ɔdɔ a ɛte saa adi? Ɔno ankasa kyerɛkyerɛɛ mu sɛ: “Obi nni dɔ kɛse a ɛsen eyi: sɛ obi de ne kra bɛto hɔ ama ne nnamfo.” (Yohane 15:13) Yesu fi ɔpɛ mu de ne nkwa a ɛyɛ pɛ too hɔ maa yɛn. Ɛne ɔdɔ a ɛsen biara a onipa bi ayi no adi akyerɛ pɛn. Nanso, Yesu daa ahofama a efi ɔdɔ mu adi wɔ akwan foforo so nso.
5. Dɛn nti na fi a Onyankopɔn Ba a ɔwoo no koro no fii ɔsoro no yɛ afɔrebɔ a efi ɔdɔ mu?
5 Wɔ Onyankopɔn Ba a ɔwoo no koro no asetra ansa na ɔrebɛyɛ ɔdesani mu no, na ɔwɔ hokwan ne dibea a ɛkorɔn wɔ soro. Ná ɔne Yehowa ne honhom abɔde horow no wɔ abusuabɔ a emu yɛ den. Ɛmfa ho hokwan ahorow yi no, Ɔba a wɔdɔ no yi ‘yii ne mu guu hɔ faa akoa tebea too ne ho so dan nnipa sɛso.’ (Filipifo 2:7) Ofii ne pɛ mu bɛtraa nnipa abɔnefo mu wɔ wiase a ‘ɛda ɔbɔne no mu’ mu. (1 Yohane 5:19) So ɛno nyɛ afɔrebɔ a efi ɔdɔ mu a Onyankopɔn Ba no bɔe?
6, 7. (a) Akwan bɛn so na Yesu daa ahofama a efi ɔdɔ mu adi wɔ n’asase so som adwuma no mu? (b) Ɔdɔ a pɛsɛmenkominya nnim ho nhwɛso a ɛka koma bɛn na wɔayɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ Yohane 19:25-27?
6 Wɔ Yesu asase so som adwuma no nyinaa mu no, ɔdaa ahofama a efi ɔdɔ mu adi wɔ akwan horow so. Ná ɔnyɛ pɛsɛmenkominya koraa. N’adwuma no gyee n’adwene araa ma ɔde asetram anigyede a asɛm biara nni ho a nnipa ani gye ho bɔɔ afɔre. Ɔkae sɛ: “Sakraman wɔ atu, na wim nnomaa wɔ mmerebuw, na onipa ba no de, onni nea ɔde ne ti to.” (Mateo 8:20) Sɛ́ duadwumfo a na onim adwuma no, na anka Yesu betumi de bere bi asi ofie a ahomeka wom atra mu anaasɛ wayɛ ɔdan mu nkongua a ɛyɛ fɛ atɔn anya sika pii. Nanso, wamfa ne nimdeɛ anhwehwɛ honam fam nneɛma.
7 Wɔayɛ Yesu ahofama a efi ɔdɔ mu no ho nhwɛso a ɛka koma ankasa ho kyerɛwtohɔ wɔ Yohane 19:25-27. Wo de susuw nneɛma pii a ɛbɛyɛ sɛ na ahyɛ Yesu adwene ne ne koma ma wɔ awia a na ɔrebewu no ho hwɛ. Bere a na ɔrehu amane wɔ asɛndua no so no, na ɔredwen n’asuafo, asɛnka adwuma, ne ne titiriw no, ne mudi a obekura mu, ɛne sɛnea na ɛbɛka N’agya din no ho. Nokwarem no, na adesamma daakye nyinaa gyina ne so! Nanso, aka bere tiaa bi ma Yesu awu no, osusuw ne na Maria a ɛda adi sɛ saa bere no na ɔyɛ okunafo no nso ho. Yesu ka kyerɛɛ ɔsomafo Yohane sɛ ɔnhwɛ Maria sɛ nea ɔyɛ ɔno Yohane ankasa na, na ɛno akyi no, ɔsomafo no faa Maria kɔɔ n’ankasa fie. Enti Yesu yɛɛ nhyehyɛe a wɔnam so bedi ne na ahiade ho dwuma maa no. Ɔdɔ a pɛsɛmenkominya nnim bɛn ara na ɔdaa no adi yi!
“Wɔyɛɛ No Mmɔbɔ”
8. Hela asɛmfua a Bible no de di dwuma de kyerɛkyerɛ Yesu ayamhyehye mu no ase ne dɛn?
8 Ná Yesu wɔ ayamhyehye te sɛ N’agya. Kyerɛwnsɛm no ka Yesu ho asɛm sɛ obi a ɔkɔboaa wɔn a wɔwɔ ahohia mu esiane sɛ wɔyɛɛ no mmɔbɔ nti. Bible no de Hela asɛmfua a wɔkyerɛ ase “wɔyɛɛ no mmɔbɔ” no kyerɛkyerɛɛ Yesu ayamhyehye no mu. Nhomanimfo bi ka sɛ: “Ɛkyerɛ . . . nkate a ɛma obi da nea ɛwɔ ne mu ankasa adi. Ɛne Hela kasa mu asɛmfua a emu yɛ den sen biara a wɔde gyina hɔ ma ayamhyehye.” Susuw tebea horow bi a ayamhyehye a emu yɛ den kaa Yesu ma ɔyɛɛ ho biribi no ho hwɛ.
9, 10. (a) Tebea horow bɛn na ɛmaa Yesu ne n’asomafo no yɛe sɛ wɔbɛhwehwɛ baabi a ɛhɔ yɛ dinn akɔtra no? (b) Bere a nkurɔfokuw bi amma Yesu annye n’ahome no, ɔyɛɛ n’ade dɛn, na dɛn ntia?
9 Biribi kaa no ma odii honhom fam ahiade ho dwuma. Asɛm a ɛwɔ Marko 6:30-34 no kyerɛ ade titiriw a ɛkaa Yesu ma ohuu mmɔbɔ no. Yɛ tebea no ho mfonini hwɛ. Na asomafo no ani agye yiye efisɛ na wɔawie asɛnka ɔsatu kɛse bi. Wɔbaa Yesu nkyɛn de anigye bɛkaa nea na wɔahu ne nea wɔate nyinaa kyerɛɛ no. Nanso nnipakuw kɛse bi behyiaam, ma enti Yesu ne n’asomafo no annya bere annidi mpo. Esiane sɛ na Yesu ani da hɔ bere nyinaa nti, ohui sɛ na asomafo no abrɛ. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo nso mommra mmɛsen nkɔ sare so fa baabi, na monkɔhome kakra.” Wɔfaa ɔkorow twaa Galilea Po no wɔ atifi fam tɔnn kɔɔ baabi a ɛhɔ yɛ dinn. Nanso nkurɔfokuw no hui sɛ wɔrekɔ. Afoforo nso tee. Eyinom nyinaa tutuu mmirika faa atifi fam mpoano hɔ, na wokoduu agya hɔ ansa na ɔkorow no redu hɔ!
10 So ɛhaw Yesu sɛ wɔamma wannye n’ahome? Dabida! Nnipa mpempem pii yi a na wɔretwɛn no no a ohuu wɔn no yɛɛ no mmɔbɔ. Marko kyerɛwee sɛ: “Ohuu nkurɔfokuw pii, na wɔyɛɛ no mmɔbɔ, efisɛ na wɔte sɛ nguan a wonni hwɛfo; na ofii ase kyerɛkyerɛɛ wɔn nneɛma pii.” Yesu huu saa nkurɔfo yi sɛ ankorankoro a wohia honhom fam mmoa. Ná wɔte sɛ nguan a wɔayera nenam, na wonni hwɛfo biara a ɔbɛkyerɛ wɔn kwan anaasɛ ɔbɛbɔ wɔn ho ban. Ná Yesu nim sɛ nyamesom akannifo atirimɔdenfo a na ɛsɛ sɛ wɔyɛ ahwɛfo pa no abu wɔn ani agu mpapahwekwa no so. (Yohane 7:47-49) Nkurɔfo no yɛɛ no mmɔbɔ, enti ofii ase kyerɛkyerɛɛ wɔn ‘Onyankopɔn Ahenni ho ade.’ (Luka 9:11) Hyɛ no nsow sɛ nkurɔfo no yɛɛ Yesu mmɔbɔ mpo ansa na ɔrehu sɛnea na wɔbɛyɛ wɔn ade wɔ nea na ɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn no ho. Enti, ɛnyɛ kyerɛ a ɔkyerɛkyerɛɛ nkurɔfokuw no na ɛmaa ne yam hyehyee no, na mmom ɛyɛ ayamhyehye na ɛma ɔkyerɛkyerɛɛ wɔn.
“Ɔteɛɛ ne nsa kaa no”
11, 12. (a) Ná wobu akwatafo wɔ Bible mmere mu dɛn, nanso bere a ɔbarima bi a na “kwata ayɛ ne ho ma” baa Yesu nkyɛn no, dɛn na ɔyɛe? (b) Ɛbɛyɛ sɛ Yesu nsa a ɔde kaa ɔkwatani no kaa no dɛn, na oduruyɛfo bi asɛm no kyerɛkyerɛ eyi mu dɛn?
11 Biribi kaa no ma oyii nkurɔfo fii amanehunu mu. Nnipa a na wɔwɔ nyarewa pii hui sɛ na Yesu wɔ ayamhyehye, enti wɔbɛnee no. Eyi daa adi titiriw bere a na nkurɔfokuw bi di Yesu akyi na ɔbarima bi a “kwata ayɛ ne ho ma” baa ne nkyɛn no. (Luka 5:12) Wɔ Bible mmere mu no, na woyi akwatafo kogu baabi sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛbɔ afoforo ho ban na wɔangu wɔn ho fĩ. (Numeri 5:1-4) Nanso, bere bi akyi no, rabifo akannifo no hyɛɛ akwatafo ho adwemmɔne bi ho nkuran, na wɔyɛɛ wɔn ankasa mmara de hyɛɛ wɔn so. * Nanso, hyɛ sɛnea Yesu buaa ɔkwatani bi no nsow: “Na ɔkwatani bi baa ne nkyɛn bɛsrɛɛ no, na ɔkotow no see no sɛ: Sɛ wopɛ a, wubetumi ama me ho afi. Na ɔyɛɛ no mmɔbɔ, na ɔteɛɛ ne nsa kaa no, na osee no sɛ: Mepɛ, wo ho mfi. Na ntɛm ara kwata no fii ne ho, na ne ho fii.” (Marko 1:40-42) Na Yesu nim sɛ etia mmara sɛ ɔkwatani no bɛba hɔ mpo. Nanso, sɛ́ anka Yesu bɛpam no no, ɔyɛɛ no mmɔbɔ araa ma ɔyɛɛ biribi a anka ɛnsɛ sɛ ɔyɛ. Yesu de ne nsa kaa no!
12 So wubetumi ahu sɛnea nsa a ɔde kaa no no kyerɛ maa ɔkwatani no? Sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ mu a, susuw osuahu bi ho hwɛ. Oduruyɛfo Paul Brand, a ɔyɛ kwata ho ɔbenfo, ka ɔkwatani bi a ɔhwɛɛ no yare wɔ India no ho asɛm. Bere a oduruyɛfo no rehwɛ ɔkwatani no, ɔde ne nsa too ne bati na ɔnam nsɛm asekyerɛfo bi so kyerɛkyerɛɛ akwan a ɔbɛfa so asa ɔbarima no yare mu. Ɔkwatani no fii ase sui prɛko pɛ. Oduruyɛfo no bisae sɛ: “Maka asɛmmɔne bi anaa?” Nsɛm asekyerɛfo no de aberante no kurom kasa bisaa no na obuae sɛ: “Dabi, oduruyɛfo. Ɔkyerɛ sɛ wo nsa a wode too ne bati no nti na ɔresu. Mfirihyia pii ni a obiara mfaa ne nsa nkaa no kosii sɛ ɔbaa ha yi.” Ɔkwatani a ɔbaa Yesu nkyɛn no fam no, ne nsa a ɔde kaa no no kyerɛɛ biribi a ɛsen saa koraa. Ne nsa a ɔde kaa no biako no maa yare a na ama wɔapam no afi nnipa mu no kɔe!
13, 14. (a) Bere a na Yesu rebɛn Nain kurow no, santen bɛn na ohyiae, na dɛn na ɛmaa tebea yi yɛɛ awerɛhow titiriw? (b) Dɛn na ayamhyehye a Yesu wɔ no kaa no ma ɔyɛ maa okunafo a ofi Nain no?
13 Biribi kaa no ma oyii awerɛhow fii hɔ. Afoforo awerɛhodi yɛɛ Yesu mmɔbɔ yiye. Sɛ nhwɛso no, susuw asɛm a ɛwɔ Luka 7:11-15 no ho hwɛ. Esii wɔ Yesu som adwuma no mfinimfini mu hɔ, bere a ɔbɛn Galilea kurow, Nain, kurotia no. Bere a Yesu bɛn kurow no pon ano no, ohyiaa ayifo bi a wɔato santen. Na tebea no yɛ awerɛhow yiye. Ná aberante bi a wodi no bakoro awu, na na ɛna no yɛ okunafo. Ɛda adi sɛ na wadi santen a ɛte saa—ne kunu de—mu pɛn. Saa bere yi de na ɛyɛ ne ba a ebia ɔno na na ɔhwɛ no no de. Ebetumi aba sɛ na ayiasefo foforo ka nkurɔfokuw no ho a na wɔrebɔ abubuw na wɔreto awerɛhow nnwom. (Yeremia 9:17, 18; Mateo 9:23) Nanso, Yesu hwɛɛ ɛna a na awerɛhow ahyɛ no ma no a akyinnye biara nni ho sɛ na ɔbɛn funu adaka a na ne ba no da mu no.
14 Ɛna a na ne ba awu no ‘yɛɛ Yesu mmɔbɔ.’ Ɔde nne a awerɛkyekye wom ka kyerɛɛ ɛna no sɛ: “Nsu!” Ɔkɔkaa funu adaka no a na obiara mfrɛɛ no. Wɔn a na ɛso wɔn—a ebia nkurɔfokuw a aka ka ho—no gyinae. Yesu de ɛnne a emu yɛ den kasa kyerɛɛ efunu no sɛ: “Aberante, mise wo sɛ: Sɔre!” Dɛn na ɛbae? “Owufo no sɔre traa ase, na ofii ase kasae” te sɛ nea wasɔre afi nnahɔɔ mu! Afei asɛm a ɛka koma sen biara no dii hɔ: ‘Na Yesu de no maa ne na.’
15. (a) Abusuabɔ a ɛwɔ ayamhyehye ne nneyɛe mu bɛn na Bible mu asɛm a ɛfa nkurɔfo a wɔyɛɛ Yesu mmɔbɔ ho no ma ɛda adi? (b) Ɔkwan bɛn so na yebetumi asuasua Yesu wɔ eyi mu?
15 Dɛn na yesua fi saa nsɛm yi mu? Hyɛ abusuabɔ a ɛwɔ ayamhyehye ne nneyɛe mu no nsow wɔ emu biara mu. Afoforo tebea a enye a Yesu hui no ma wɔyɛɛ no mmɔbɔ, na ne yam hyehyee no maa ɔyɛɛ ho biribi. Yɛbɛyɛ dɛn atumi adi ne nhwɛso no akyi? Sɛ́ Kristofo no, yɛwɔ asɛyɛde sɛ yɛka asɛmpa no na yɛyɛ asuafo. Ɔdɔ a yɛwɔ ma Onyankopɔn no na ɛkanyan yɛn titiriw. Nanso, ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ, ayamhyehye nso ka ho bi na ɛma yɛyɛ saa adwuma yi. Sɛ yɛte nka ma afoforo sɛnea Yesu yɛe no a, yɛn koma bɛka yɛn ma yɛayɛ nea yebetumi biara de aka asɛmpa no akyerɛ wɔn. (Mateo 22:37-39) Na ayamhyehye a yɛbɛda no adi akyerɛ mfɛfo gyidifo a wɔrehu amane anaasɛ wɔredi awerɛhow no nso ɛ? Yentumi nyi honam fam amanehunu mfi hɔ anwonwakwan so na yentumi nyan awufo nso. Nanso, yebetumi ada ayamhyehye adi denam hu a yɛbɛma wɔahu sɛ yedwen wɔn ho ne mmoa a ɛfata a yɛde bɛma wɔn so.—Efesofo 4:32.
“Agya, Fa Firi Wɔn”
16. Ɔkwan bɛn so na ɔpɛ a na Yesu wɔ sɛ ɔde bɔne befiri no daa adi wɔ bere mpo a na ɔsɛn asɛndua so no?
16 Yesu daa ɔdɔ a N’agya wɔ adi pɛpɛɛpɛ wɔ ɔkwan foforo a ɛho hia so—na ‘ɔde firi.’ (Dwom 86:5) Ɔpɛ a na ɔwɔ yi daa adi bere a na ɔsɛn asɛndua no so no. Bere a na Yesu rewu animguase wu a na wɔde nnadewa abobɔ ne nsa ne ne nan mu no, dɛn ho asɛm na ɔkae? So ɔkae sɛ Yehowa ntwe wɔn a na wɔrekum no no aso? Dabida, nsɛm a edi akyiri a Yesu kae no bi ne: “Agya, fa firi wɔn na wonnim nea wɔyɛ!”—Luka 23:34. *
17-19. Akwan bɛn so na Yesu daa no adi sɛ ɔde ɔsomafo Petro bɔne afiri no wɔ pa a ɔpaa No mprɛnsa no ho?
17 Ebia yebetumi ahu Yesu fafiri ho nhwɛso a ɛsen saa wɔ sɛnea ɔne ɔsomafo Petro dii no mu. Akyinnye biara nni ho sɛ na Petro dɔ Yesu yiye. Wɔ Nisan 14, Yesu asase so asetra anadwo a etwa to mu no, Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, masiesie me ho sɛ me ne wo bɛkɔ afiase ne owu mu.” Nanso, nnɔnhwerew kakraa bi akyi no, Petro paa Yesu mprɛnsa sɛ onnim no koraa mpo! Bible ka nea esii bere a Petro paa Yesu ne mprɛnsa so no ho asɛm kyerɛ yɛn sɛ: “Awurade dan ne ho hwɛɛ Petro anim.” Esiane sɛ na Petro bɔne no abunkam ne so nti, ‘ofii adi kosui pii.’ Bere a Yesu wui akyi saa da no, ebetumi aba sɛ ɔsomafo no susuw ho sɛ, ‘So me Wura de afiri me?’—Luka 22:33, 61, 62.
18 Ankyɛ na Petro nyaa ho mmuae. Wonyan Yesu Nisan 16 anɔpa, na ɛda adi sɛ ɔkɔsraa Petro saa da no ara. (Luka 24:34; 1 Korintofo 15:4-8) Dɛn nti na na Yesu ani wɔ ɔsomafo a na wapa No denneennen saa no so? Ebetumi aba sɛ na Yesu pɛ sɛ ɔma Petro a na wanu ne ho no awerɛhyem sɛ ne Wura da so dɔ no na obu no. Nanso, Yesu yɛɛ ade traa awerɛhyem a ɔde maa Petro no so.
19 Bere bi akyi no, Yesu yii ne ho adi kyerɛɛ asuafo no wɔ Galilea Po no ho. Saa bere yi, Yesu bisaa Petro (a na wapa ne Wura mprɛnsa no) mprɛnsa sɛ ɔdɔ no anaa. Nea ɛto so abiɛsa no akyi no, Petro buae sɛ: “Awurade, wunim ade nyinaa, wunim sɛ medɔ wo.” Nokwarem no, na Yesu a otumi hu komam no nim sɛnea na Petro dɔ no no koraa. Nanso, Yesu maa Petro nyaa hokwan a ɔde besi ne dɔ so dua. Nea ɛsen saa no, Yesu maa Petro ahyɛde sɛ ‘ɔnyɛn’ Ne “nguammaa.” (Yohane 21:15-17) Na wadi kan ama Petro adwuma sɛ ɔnka asɛm no. (Luka 5:10) Na afei, Yesu daa ahotoso kɛse a ɔwɔ wɔ Petro mu adi maa no asɛyɛde foforo a emu yɛ duru—sɛ ɔnhwɛ wɔn a wɔbɛba abɛyɛ Kristo akyidifo no. Ɛno akyi bere tiaa bi no, Yesu maa Petro adwuma titiriw bi wɔ asuafo no dwumadi mu. (Asomafo no Nnwuma 2:1-41) Hwɛ sɛnea ɛbɛyɛ sɛ Petro bo tɔɔ ne yam sɛ ohui sɛ Yesu de afiri no, na ɔda so ara wɔ ne mu ahotoso!
So ‘Woahu Kristo Dɔ’?
20, 21. Ɔkwan bɛn so na yebetumi ‘ahu Kristo dɔ’ no koraa?
20 Nokwarem no, Yehowa Asɛm ka Kristo dɔ ho asɛm fɛfɛɛfɛ. Nanso, ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ yɛyɛ yɛn ade wɔ Kristo dɔ ho? Bible hyɛ yɛn nkuran sɛ ‘yenhu Kristo dɔ a ɛtra so no.’ (Efesofo 3:18) Sɛnea yɛahu no, Yesu asetra ne ne som adwuma ho nsɛm a ɛwɔ Nsɛmpa no mu no kyerɛkyerɛ yɛn Kristo dɔ ho ade pii. Nanso, ‘Kristo dɔ a yebehu’ koraa no hwehwɛ pii sen nea Bible ka fa ne ho a yebehu.
21 Hela asɛm a wɔkyerɛɛ ase ‘behu’ no kyerɛ sɛnea “wɔnam osuahu so hu biribi.” Sɛ yɛda ɔdɔ adi sɛnea Yesu yɛe no—fi ayamye mu de yɛn ho ma afoforo, fi ayamhyehye mu di wɔn ahiade ho dwuma, fi yɛn komam de wɔn bɔne firi wɔn—a, ɛnde yebetumi ate ne nkate horow ase ankasa. Saa kwan yi so no, yɛnam osuahu so ‘behu Kristo dɔ a ɛtra so no.’ Na mommma yɛn werɛ mmfi da sɛ dodow a yɛbɛyɛ sɛ Kristo no, dodow no ara na yɛbɛbɛn onii a Yesu suasuaa no pɛpɛɛpɛ, Yehowa, yɛn Nyankopɔn a ɔwɔ ɔdɔ no.
^ nky. 11 Rabifo mmara no kae sɛ ɛnsɛ sɛ obiara bɛn ɔkwatani basafa anan (bɛyɛ anammɔn asia). Nanso, sɛ mframa rebɔ de a, ɛsɛ sɛ ɔkwatani no kɔ akyiri anyɛ yiye koraa no, basafa 100 (bɛyɛ anammɔn 150). Midrash Rabbah ka rabini bi a ɔde ne ho siee akwatafo ne ɔfoforo a na ɔtotow abo bɔ akwatafo de pam wɔn ho asɛm. Enti na akwatafo nim sɛnea ɛyɛ yaw sɛ wɔbɛpo obi, ɛne sɛnea ɛhaw adwene sɛ wobebu no animtiaa ayɛ biribi de akyerɛ sɛ wonhia no no.
^ nky. 16 Wɔayi Luka 23:34 no fã a edi kan no afi tete nsaano nkyerɛwee bi mu. Nanso, esiane sɛ yehu saa nsɛm yi wɔ nsaano nkyerɛwee foforo pii a edi mũ mu nti, wɔde aba New World Translation ne nkyerɛase foforo pii mu. Ɛda adi sɛ na Yesu reka Roma asraafo a wɔbɔɔ no asɛndua mu no ho asɛm. Na wonnim nea wɔreyɛ, efisɛ na wonnim Yesu nipaban ankasa. Nokwarem no, na nyamesom akannifo a wɔhyɛɛ ne kum no ho nkuran no di fɔ koraa, efisɛ wɔboapa fi nitan mu na ɛyɛɛ saa. Wɔn mu pii ntumi nnya bɔne fafiri.—Yohane 11:45-53.
Mateo 9:35-38 Ɔkwan titiriw bɛn so na Yesu daa mmɔborohunu, anaa ayamhyehye adi, na ɛsɛ sɛ eyi ka yɛn dɛn?
Yohane 13:34, 35 Dɛn nti na ɛho hia sɛ yɛda Kristo dɔ adi?
Romafo 15:1-6 Ɔkwan bɛn so na yebetumi asuasua Kristo adwene a pɛsɛmenkominya nnim no?
2 Korintofo 5:14, 15 Nkɛntɛnso bɛn na ɛsɛ sɛ anisɔ a yɛwɔ ma agyede no nya wɔ yɛn botae ahorow ne yɛn asetra kwan so?
Ɔtamfo nitefo bi wɔ hɔ a odidi yɛn ase na ɔmpɛ sɛ yɛpa yɛn ho akyi. Adesua asɛm yi bɛma yɛahu ɔtamfo no. Bio, ɛbɛboa yɛn ma yɛahu sɛnea yɛde Bible mu nsɛm bɛko atia no.